I-Tinder Spy Software - Hlola uhlu lwe-Tinder Chat & Friends ngolwazi lomlando wengxoxo
I-Tinder Spy App - Gcina izingxoxo nohlu lwabangani ku-Tinder Social App
I-Tinder iyinhlangano ethandwayo yokuthandana ikuvumela ukuthi uthole umlingani wakho othandana naye ku-intanethi. I-TheneneSpy ikuvumela ukuthi uqaphele izingxoxo zeTinder, uhlu lwabangani kanye nezintandokazi zokuthandana ezihloswe kuzo.
Hlola ama-Group Chats neTheOneSpy Tinder Spy App
I-software ye-TheOneSpy Tinder yokuqapha ivumela umsebenzisi ukuba afunde imilayezo yangaphakathi nangaphandle ethunyelwe noma eyamukelwe kusuka kubantu ngabanye noma ngamaqembu. Ukusebenzisa lesi sici sakho Idivayisi ye-Android kufanele igxilwe futhi idivayisi yakho ye-iOS idinga ukuboshwa.
I-TheOneSpy Tinder Spy App Ivumela Umsebenzisi ukuthi:
Funda imiyalezo yeTinder ethunyelwe futhi itholakele
Hlola izingxoxo zeqembu
Funda qedela izingxoxo zokuqedela
Buka ukuphola izintandokazi ze-target
Buka usuku nesitembu sesikhathi
Indlela Yokuqapha I-Tinder Dating App ne-TheOneSpy Monitoring Software Control Panel?
Ukuba ne I-TheneneSpy efakwe kudivayisi eqondisiwe uzoqala ngokuzenzakalelayo ukuvuselela Tinder izingxoxo kudeshibhodi yomsebenzisi. Konke okudingeka ukwenze kungena ngemvume ku-akhawunti yakho ye-TOS ngokufaka imininingwane yakho yomsebenzisi ukungena ngemvume iwindi bese uchofoza inkinobho yokungena ngemvume lokhu kuzokuholela Amasevisi Page, lapho udinga ukuchofoza inkinobho yokulawula i-Control Panel ukubuka ideshibhodi.
Ngemuva kokungena ngemvume kusuka kudeshibhodi, ungabheka ingxoxo yeTinder ngokuchofoza ithebhu yokuxoxa ngakwesokudla. Izokunikeza umlando ophelele wengxoxo yeTinder nohlu loxhumana nabo lwedivayisi ehlosiwe.
Iziphi Izici Zokuphepha Zamaselula Ezihlinzeka Nge-Tinder Spy App?
Kungani Udingayo i-TheOneSpy Tinder Spy App?
I-Tinder uhlelo lokusebenza lokudala lokuphola kodwa amaphesenti angu-XNUM kubasebenzisi bayo yizingane ze-7 kuya kwe-12 eneminyaka engaba yingozi enkulu yokuxhashazwa. Ngakho amathuba okuba ingane yakho isebenzisa lolu hlelo lokusebenza oluyingozi liphezulu. I-TOS ikhona inhloli yohlelo lokusebenza ukuqapha imilayezo yeTinder okungakusiza ukuba uqinisekise ukuthi ingane yakho ayixhasiwe nomuntu oshayayo. Futhi, ungakwazi khusela ingane yakho ezindabeni zomzimba womzimba okuholela ekuphansi ukukhathazeka ngokweqile nokwengqondo.
2.5 ngokusekelwe ku 8 amavoti
I-Tinder Spy App